ဟာဂရ၏အသက်တာ ပြောင်းလဲခြင်း၊ | Real Conversion
ဒေါက်တာ၊ အာရ်အယ်လ်၊ တိုင်မာဂျေအာရ်၏၊
၂၀၁၁၊ခုနှစ်၊အောက်တိုဘာလ၂၃ရက်၊ လောစ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊ သခင်ဘုရားနေ့ နံနက်ပိုင်း ဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြားသော ဒေသနာတော်၊
“ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ရ၏။ ကိုယ်အလို အလျှောက်ရောက်သည်မဟုတ်၊ ဘုရားသခင်သနားတော်မူရာဖြစ်သတည်း။ (ဧဖက်၂း၈) ။
ဒီကနေ့နံနက် ကမ္ဘာဦးကျမ်းထဲက ဟာဂရ၏ အကြောင်းကို ဆွေးနွေးပြောကြား လိုပါသည်။ ဟာဂရ၏ အသက်တာအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ သနားခြင်းကျေးဇူးတော်ကြာင့် အပြစ်သားတစ်ဦးသည် ကယ်တင် ခြင်းသို့ ရောက်ရသည်ဟူသော ပုံသက်သေကို ထင်ရှားပေးခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် သိက္ခာမဲ့၍ ယုတ်မာသော ပုံပြင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းက လူသားတိုင်း၏ ဇာတိသဘောသည် အပြစ်သားများဖြစ်သည်ကို ပြသလိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ရှေးဦး လူသားအာဒံ၏ ပြစ်မှားမှုကြောင့် အာဒံမှ ဆင်းသက်သော လူသားမျိုးနွယ်စု တစ်ခုလုံး ဇာတိသဘော၌ အပြစ်စွဲလျှက်ရှိပါသည်။ “ထိုအကြောင့်အရာမူကား၊ အပြစ်တရားသည် တစ်ယောက်သောသူအားဖြင့်၊ ဤလောကသို့ ဝင်လာ၍၊ အပြစ်တရားအားဖြင့် သေခြင်းတရားဝင်သည် နှင့်အညီ၊ လူအပေါင်းတို့သည် အပြစ်ရှိသောကြေင့် သေခြင်းသို့ ရောက်ရ ကြ၏ဟု (ရောမ ၅း၁၂)၌ ကျမ်းစာလာပါသည်။
ဟာဂရ၏ အပြစ်အားလုံးကိုဖော်ထုတ် ပြောကြားမည်မဟုတ်တော့ပါ။ သူသည် အဂုတ္တု အမျိုးသမီးတဦး ဖြစ်ပါသည်။ သူသည် စာရဲ၏ ကျွန်မတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။ အာဗြံ၏ ဇနီးစာရဲ့ ကျူးလွန်သော အပြစ်သည်၊ ဘုရားရှင်သည် သူမအား သားယောင်္ကျားကို ပေးမည်ဟူသော ဂတိကို မယုံကြည်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ စာရဲ၏ နောက်ထပ်အပြစ်သည် ဟာဂရ မွေးဖွါးသောသားကို ဖခင်တော်စပ်ကြောင်း အာဗြံပြောခြင်းဖြစ်သည်။ အာဗြံကိုယ်တိုင်လည်း စာရဲကျွန်မနှင့် အာဗြံအားမှား ယွင်းသော အပြစ်ကို ကျူးလွန်ခဲ့သည်။ ဟာဂရသည် ဝိညာဉ် ပျောက်ဆုံးနေသော သူပင်ဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ ဟာဂရသည် ဘုရားရှင်ကို မသိသော အဲဂုတ္တုပြည်က အမျိုးသမီးဖြစ်၍ ဖြစ်ပါသည်။
၁။ ပထမ၊ အာဗြံနှင့် စာရဲတို့၏ ဆိုးသွမ်းမိုက်မဲ့သော ညှင်းပန်းနှိပ်စပ်ခြင်းကို ခံရသော်လည်း ဟာဂရ ကယ်တင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရ၏။
ဤအသင်းတော်သို့ ရောက်ရှိလာသောအချို့သော လူငယ်လူရွယ်များ အသက်တာ မပြောင်းလဲ သေးသူများလည်းရှိပါမည်၊ သင့်အသက်တာ အသစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီး ခရစ်ယာန်တစယောက်ဖြစ် လာဖို့၊ အတုယူဖွယ်မကောင်းသော အချို့ခရစ်ယာန်တို့၏ အကျင့်စာရိုက်များက သင့်ကို အစီးအတား ဖြစ်စေသော အခြားအရာကို သင်မြင်တွေခဲ့ပါမည်။ မကြာခဏဆိုသလို “အမှန်တကယ်မဖြစ်ပါဘူး၊ ဟိုမှာကြည့် သူတို့၏ အကျင့်စရိက်များကို ကြည့်ပါအုံး”ဟူ၍ အသင်းတော် ကလေးသူငယ်များကိုပင် စဉ်းစားစရာဖြစ်စေသော အပြုအမူဆိုး အသင်းတော်၌ ရှိပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ အသင်းတော်ကို တော်လှန်ပုန်ကန်သော သူတို့၏ အပြုအမူများက သင့်အဖို့ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း၏ တန်ဖိုး လျော့ပါးစေပါသည်။ စဉ်ကဲ့သို့ ဝိညာဉ်ဆိုးများသည် ဆိုးသွန်းမိုက်မဲ့သော အပြုအမူများ၊ အသင်းတော်ထဲ--စစ်မှန်စွာ အသက်တာပြောင်းလဲဖို့ သံသယပွားစေပါစေပါသည်။ “ဒါက အမှန်တကယ် အမှန်တရားဖြစ်ပါ့မလား” ဟူ၍ သင့်ကိုစဉ်းစား၊ တွေဝေအောင် စာတန်မာန သွေးဆောင်နေပါသည်။ ထောင်နှင့်ချီသောဝိညာဉ်များ ထို့ကဲ့သို့ ဆိုးသွင်းမိုက်မဲ့သောအပြုအမူများကြောင့် အသင်းတော်များစွာ၌ ပျောက်ဆုံးလျက်ရှိနေပါသည်။ ၎င်းသည် အသက်ဝိညာဉ် ပေါင်းများစွာကို ငရဲထဲသို့ ဆွဲချရန် စာတန်အသုံးပြုသော လက်နက်တန်ဆာပလာပင်ဖြစ်သည်။
ဤသည် ကလေးသူငယ်များအား အနောက်အယှက် ဖြစ်စေသည်သာမကဘဲ၊ ပူပူနွေးနွေး အသင်းတော်သို့ တက်ရောက်လာသော လူငယ်လူရွယ်များအဖို့၊ ဝိညာဉ်ဆိုးများက သင့်အသက်တာ အားဖြင့် သူတပါးအသက်တာအတွက် အနှောက်အယှက် ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နေပါသည်။ ဟာဂရ၏ အသက်တာကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။ သူသည် အဲဂုတ္တုပြည်က စာရဲ၏ ကျွန်၊ မဖြစ်သည်။ အခြားတပါးသော လူမျိုးနွယ်စုတို့က တရားမျှတမှု မရှိသော ဟာဂရအပေါ် အပြုအမူဆက်ဆံခြင်းတို့သည် ခရစ်ယာန်တို့၏ အားနည်းမှုတခုကဲ့သို့ ရှုမြင်ကြလာပါသည်။ ဟာဂရကိုယ်တိုင်လည်း အာဗြံနှင့် စာရဲတို့၏ ဆိုးသွန်းသောအပြုအမှုကို တွေ့မြင်ခဲ့သည်မဟုတ်ပါလား။ ၎င်းအရှုပ်အထွေးက သူမအား ကြောက်လန့် ဖွယ် အရ Iပ်ထုပ် ဖြစ်စေခဲ့သည်။
“ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏။ကိုယ့်အလိုအ လျှောက်ရောက်သည်မဟုတ်။ ဘုရားသခင်သနားတော်မူရာ ဖြစ်သတည်း “(ဧဖက်၂း၈)
ကျွန်ုပ်လူငယ်စဉ်ကများစွာသော နှစ်ခြင်းအသင်းတော် ဝင်များစွာတို့လည်း လူသားဖြစ်သည် အားလျော်စွာ ကျွန်ုပ်ကို ခရစ်ယာန်ဖြစ်လာဖ့ မဆွဲခေါ်ခဲ့ကြဘူး၊ ငြင်းပယ်ခဲ့ကြသည်။ နောက်ကြောင်းကို ပြန်တွေးကြည့်ပါက၊ ကျွန်တော် ကယ်တင်ခြင်းခံရသည်ကို ကျွန်ပ်ကိုကျွန်တော် အံ့ဩမိပါသည်။ မနှစ်မြို့ဖွယ် နှစ်ခြင်းအသင်းတော်သူ^သားတို့၏ အပြုအမူများကြားက စစ်မှန်သော ထာ၀ရအသက်ရှင် ခွင့်ကို ကျွန်ုပ်ရရှိနေသည့်အတွက် မိမိကိုယ်ကို အံ့ဩမိတာအမှန်ပါပဲ၊ “အံ့ဩဖွယ်ကျေးဇူးတော်” ဓမ္မသီချင်းကိုသီဆိုသည်!
(၁၇၂၅-၁၈၀၇ခုနှစ်၊ ဂျွန်နယူးတန်သီကုံးသော “အံ့ဩဖွယ်ကျေးဇူးတော်” )။
ထိုအသင်းတော် ခရစ်ယာန်များ၏ ဆိုးသွန်းမိုက်မဲ့သောအပြုအမူ ကြုံတွေ့ဆက်ဆံခြင်းခံရဖူးသော်လည်း၊
ဟာဂရကဲ့သို့၊ ကျွန်ုပ်လည်းဘုရားရှင်၏ မဟာကျေးဇူးတော်ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၌ မဖြစ်မနေပြောပြရန် အချို့ကျန်ပါသေးသည်။ ဟာဂရကြုံတွေ့သော အဖြစ်အပျက်သည် ကြုံတောင်ကြုံခဲ့သော အဖြစ်အပျက်တော့မဟုတ်ပါဘူး၊ ကျွန်ုပ်၌လည်း ထိုကဲ့ပင်ဖြစ်သည်။ ဒီနေ့မနက်၊ ဤအသင်းတော်၌ ရောက်ရှိလာကြသော ဓမ္မမိတ်ဆွေများလည်း၊ ထိုအတွေ့အကြုံများကို ကြုံတွေ့ခဲ့ကြမှာပါ အသင်းသူ^သားတို့၏ အပြစ်အနာဆာများ၊ ဆိုးသွန်းမိုက်မဲ့ခဲ့သော အပြုအမူများတွေ့ကြုံခံစားရကြသော်လည်း၊ စစ်မှန်သော ယုံကြည်သူဆိုသည်မှာ တွန်းလှန်၍ မရနိူင်သော ဘုရားရှင်၏ မဟာကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြတာအမှန်ပါပဲ။ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ နားမလည်သော်လည်း၊ မှားယွန်းနေသော ခရစ်ယာန်များ၏ မီးပမာတောက်လောင်နေသော စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းသည် လိုအပ်နေပေမည်၊ ၎င်းအတွေ့အကြုံအရ သင်သည် မီးထဲလျောက်ရသဖြင့် မီးဖြင့်သန့်စင်ပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ သင်သည် မီးဖြင့် သန့်စင်ပြီးသော ရွှေစင်ပမာ ဖြစ်နေပါမည်။ ဓမ္မသီချင်း တစ်ပုဒ်၌ ရေးသားထားသကဲ့သို့၊
မီးတောက်မီးလျှံ သင့်အား မထိခိုက်ရ
မီးဖြင့် သန့်စင် ရွှေစင် ပမာတောက်ပရ
(၁၇၈၇ခုနှစ်၊ စာရေးသူမသိ၊”အစဉ်စီးဆင်းစမ်းရေအေး” )
အသင်းတော်ကို စွန့်ခွာသွားသော သင်မိဘများကပင် သင့်အားရပ်တန့်စေ၍ မရနိူင်၊ သင်အပေါင်းအသင်း၊ မိတ်သင်္ဂဟ များကလည်းမတတ်နိူင်၊ မှားယွန်းနေသော ခရစ်ယာန်များကလည်း သင့်ကို ရပ်တန့်စေနိူင်မည်မဟုတ်ပါ၊ သူတို့က သင့်အာ ;ရပ်တန့်စေ၍မရနိုင်၊ သင့်အား မည်ကဲ့သို့ပင် စုံစမ်းစစ်ဆေးနေသော်လည်း၊ သင့်အား ရပ်တန့်စေမည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ တွန့်လှန်၍ မရနိုင်သော ဘုရရားသခင်ကျေးဇူးတော်က သင့်အား ခရစ်တော်ဆီသို့ တွန်းပို့နေပါက ဘယ်အရာကမှ သင့်အားရပ်တန့်၍ မရနိုင်ပါ၊ ဟာလေလုယာ၊ ဟာလေလုယာ! အကယ်၍ ရပ်တန်၍ မရနိုင်သော ကျေးဇူးတရားက သင့်အား ခရစ်တော်ထံ ပို့ဆောင်ပါက သင်သည် ခရစ်တော်ကို တွေ့ပါလိမ့်မည်၊ သူတို့၏ မည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုကမှ သင့်အား ရပ်တန့်စေနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အံ့ဩဖွယ်ကျေးဇူးတော်၊ ဓ္မသီချင်းပြန်လည်၍ သီဆိုပါသည်!
၂။ဒုတိယ၊ဟာဂရ၏ ပထမအချိန်ဘုရားရှင်နှင့်ဆုံတွေ့သော အတွေ့အကြုံများ၊
စာရဲသည် အရင်ကထက်ပိုသော ညှင်းဆဲမှုကို ဟာဂရအားပြုမူ၏။ စာရဲသည် မောင်းထုတ် သဖြင့် “ကျွန်မသည် သခင်မထံမှ ထွက်ပြေးလေ၏”ဟူ၍ (ကမ္ဘာဦးကျမ်း၁၆း၆)၌ ဖော်ပြ ထားပါသည်။ အခုဆိုလျှင် ဟာဂရတစ်ယောက် ကိုယ်ဝန်တစ်လုံးဖြင့် သဲကန္တာရထဲ လှည့်လည်နေရသည်။ မကြာခင်မှာ ငတ်မွတ်ပြီးကြောင့် အသက်ပင် ဆုံးရှုံးရပါတောမည်။ ဘုရားသခင် ထံတော်ပါးက ကောင်းကင်တမန် သည် သွေ့ခြောက်သော သဲကန္တာရ၌ လှည့်လည်နေသော ဟာဂရကို နုတ်ဆက်လေသည်။ ဒေါက်တာမက်ကီး ပြောကြားသကဲ့သို့ ဟာဂရကို လာနုတ်ဆက်သော ကောင်းကင်တမန်ဟူသည် ခရစ်တော်ဘုရား လူ့ဇာတိခံယူဖို့ ကြွလာခြင်းကို ဆိုလိုသည်ဟူသော ရေးသားချက်ကို ကျွန်တော်သဘောတူပါသည်။ ဤသည် ခရစ်တော်ဘုရား၏ဝိသေတလက္ခဏာပင်ဖြစ်၏။
အကြောင်းမှာ ထိုသခင်သည် ပျောက်ဆုံးနေသောသူတို့ကို အမြဲရှာဖွေလျှက် ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1981, volume I, p. 71).
ခရစ်တော်ဘုရားရှင်က ဟာဂရအား စာရဲထံပြန်လာဖို့ ပြောကြားခဲ့သည်။ “သင်၏သခင်မထံ သို့ပြန်၍ သူ၏အုပ်စိုးခြင်းကို ခံလောဟုအမိန့်ရှိ၏။ (ကမ္ဘာဦးကျမ်း၁၆း၉)၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကမ္ဘာဦးကျမ်း (၁၆း၁၃-၁၄)ကို ဖွင့်ပြီး မတ်တပ်ရပ်လျှက် ၎င်းအခန်းငယ်နှစ်ခုကို အသံကျယ်ကျယ်ဖြင့် ဖတ်ကြပါစို့
“ထိုသို့မိန့်မွက်တော်မူသော ထာ၀ရဘုရားကို အာတောဧလရေခဟူသော အမည်ဖြင့်ခေါ် ဝေါ်၍၊ ငါ့ကို မြင်တော်မူသောသူကို ဤအရပ်၌ ပင်ငါဖူးမြင်ရသည်သကားဟုဟာဂရ ဆိုလေ၏။ထို့အကြာင်းကို အစွဲပြု၍ ထိုရေတွင်းကို ဗေရလဟဲရောဟု သမုတ်ကြ၏။ ကာဒေရှမြို့နှင့် ဗေရက်မြီု့စပ်ကြားမှာ ရှိသတည်း။ (ကမ္ဘာဦးကျမ်း၁၆း၁၃-၁၄)”။
အားလုံးထိုင်နိုင်ပါပြီ၊ဟာဂရကထိုရေတွင်းကို”ဗေရလဟဲရော”ဟုသမုတ်ခဲ့သည်။ဟေဗြဲဘာသာစကားအားဖြင့် “ရေတွင်း၏အရှင်ကကျွန်မကိုမြင်တွေ့ပြီး အသက်ရှင်စေခဲ့ပြီ”ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ်ရှိပါသည်။ဟာဂရပြောကြားခဲ့ သည်မှာ”ငါ့ကိုမြင်သောသူဘုရား”ဟူ၍ပြောဆိုခဲ့သည်။သူကထပ်၍”ငါ့ကို မြင်တော်မူသောသူကို ဖူးမြင်ရပြီ” ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အာဗြံ ထုံးစံအတိုင်းဘုရားရှင်ထံ ယစ်ပူဇော်လျှက် ဆုတောင်းနေသည်ကို ဟာဂရမြင်တွေ့ ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အာဗြံနှင့်စာရဲတို့နှစ်ယောက် အတူဆုတောင်းသံကိုလည်း ဟာဂရကြားဖူးခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ သို့သော် ဟာဂရသည် ဘုရားရှင်ကို မသိမြင်ခဲ့ဖူးပေ။ ယခုတွင် ဘုရားရှင်သည် လူပုဂ္ဂုလ်ကဲ့သို့ ပထမ အကြီမ်ဟာဂရဆီသို့ ထင်ရှားခဲ့ပါသည်။ ထိုသူသည် “ငါ့ကိုမြင်တွေ့တော်မူသောသူ”ဟူ၍ ဟာဂရပြော ကြာခဲ့သည်။
သင်းထောက်ဒေါက်တာကေကန်လည်း ဘုရားမဲ့အသက်တာ၌ နှစ်ရှည်ကာလ အတန်ကြာ အသက်ရှင်ရှိဖူးသည်။ သူပြောကြားခဲ့သည်မှာ “ဘုရားရှင် အမှန်တကယ်တည်ရှိသည်ကို မယုံကြည်ပါဘူး ဟူ၍ပြောကြားခဲ့သည်။ သမ္မာကျမ်းစာတော်ကို ဘယ်တော့အခါမှ မဖတ်ဖူးသော်လည်း ပြုမှားသော မှားယွန်းမူများက ကျွန်ုပ်အား အသိတရားရှိစေခဲ့သည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်သူတွေဟာ သုတမရှိသောသူဖြစ်၍ တစ်စုံတခုကို ယုံကြည်ချင်သူတွေပါဟူ၍ ထင်မိသည်။ ကျွန်ုပ်အသက်တာ နှစ်ဆယ့်တစ်နှစ်အရွယ်တွင် အချို့သော နလညေါနူငခals ဆရာများနှင့်တွေ့ခဲ့ဖူးသည် သူတို့ကကျွန်ကို ချစ်ခင်ကြင်နာ ကြပါသည်၊ သို့သော်လည်း ယေရှုကိုယုံကြည်ဖို့ ကျွန်ုပ်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၌လည်း မိမိ၏ အစီစဉ်ရှိနေတယ်လေ။ အနာဂါတ်ကျွန်ုပ်၏ အစီစဉ်ထဲတွင် မစွပ်ဖက်စေချင်ဘူးလေ။ သို့ပါသော်လည်း အခုဆိုရင် နောင်ဝိညာဉ်ရေးအကြောင်းကို စဉ်းစားနေပေပြီ။ ထိုစဉ်က သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကို ကျွန်ုပ်ပြောခဲ့သည်မှာ “အကယ်၍ ဘုရားသာ ရှိခဲ့မယ်ဆိုလျှင် လောက၌ ရှိသမျှထက် အရးကြီးဆုံးသော အရာဖြစ်ပါသည်ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့သည်။ ၁၉၇၄ခုနှစ်၊ နွေနှောင်းရာသီ၌ ဘုရားရှင်နှင့် တိုက်ရိုက်တွေ့ကြုံခဲ့ သည်။ ကျွန်ုပ်ဘ၀၏ အပြောင်းအလဲသည် တစ်ညသော နံနက်၄း၀၀အချိန်၌ပင် ဖြစ်သည်။ “ကျွန်ုပ်သည် ငိုယိုလျှက် ကျွန်ုပ်၏ အပြစ်ကို ခွင့်လွှတ်တော်မူပါဟု” ဆုတောင်းအသနား ခံခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်ဘ၀အသက်တာ၌ ပထမအကြိမ် ဆုတောင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ချက်ချင်းဆိုသလိုပင် ကျွန်ုပ်အတွင်း နှလုံးသားထဲ၌ ဘုရားရှင်သည် တကယ်ရှိနေပါလားဟူ၍ ခံစားမိပါတော့သည်။ သို့တိုင်အောင် ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီဟူ၍ မဟုတ်သေးပါ။ ထိုအတွေ့အကြုံများအရ၊ ဘုရားရှင် အမှန်တကယ်ရှိနေကြောင်း သိရသော်လည်း၊ ခရစ်တော်ယေရှုကို ကယ်တင်ရှင် အဖြစ်လက်ခံ ယုံကြည်ဖို့ အဆင်သင့်မဖြစ်ခဲ့သေးပါ။ “မိမိအသက်တာ လုံးလုံးလျားလျား ဆက်ကပ်အပ်နှံဖို့ ဆန္ဒမရှိခဲ့ဘူး၊ ကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံးထဲ၌ ခရစ်တော်သခင်နှင့်ပါတ်သက်၍ နှစ်နှစ်တိုင်တိုင် လုံးပန်းခဲ့ရသည်။ (C. L. Cagan, Ph.D. From Darwin to Design, Whitaker House, 2006, p. 17).
ဘုရားရှင် ကျွန်ုပ်အသက်တာထဲ အမှန်တပယ်သက်ဝင် ထင်ရှားခဲ့သော ပထမအတွေ့အထိကို မှတ်မိနေဆဲပါ။ ဘုရားရှင်၏ နုတ်ကပတ်တော်က ကျွန်ုပ်အားကြောက်လန့်စေသော အချိန်နာရီမတိုင်ခင်
ဘုရားရှင်ကို ကျွန်ုပ်အမှန်တကယ် ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်အသက်ဆယ့်ငါးနှစ်ရှိပါပြီ။ မျက်ရည်စီး ဆင်းလျက် မြေပေါ်လဲလျောင်းနေစဉ် ဘုရားရှင်က ကျွန်ုပ်၏အပြစ်ကို ထုထောင်းလျက်၊ ကြေညက်သည်အထိ ဆုတောင်းနေသည်ကို ကျွန်ုပ်ခံစားခဲပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထိုနေရာ သစ်ပင်ရိပ်အောက၌ နာရီများစွာ ကြာသည့်အထိ ရှိနေခဲ့သည်။ သို့သော် ဒေါက်တာကေကန်ကဲ့သို့ နှစ်အတော်ကြာသည့်အထိ ခရစ်ယာန်ဖြစ်မလာခဲ့ပါ။ ထိုစဉ် အပြစ်စီရင်ခြင်းနှင့် ပါတ်သက်၍ အချိန်ကြာမြင့်စွာ ဆုတောင်းခြင်း၊ ခံရသော်လည်းကယ်တင်ခြင်းမရရှိခဲ့ပါ။
ဤသည် ဟာဂ၏အတွေ့အကြို့ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ သူမသည် နှလုံးသားထဲ၌”ကျွန်မကို တွေ့မြင်သောဘုရား” ဟူ၍ ရေရွက်မိ၏။ ဘုရားရှင်၏ အသက်တာ၌ ပထမအကြီမ်ထင်ရှားခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။ သို့ပါသော်လည်း သူမကယ်တင်ခြင်း မရရှိခဲ့သေးပါ “အံ့ဩဖွယ်ကျေးဇူးတော်” ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုသည်။ၚ
စစ်မှန်သော ယုံကြည်ခံယူချက်မရှိပဲ ဘုရားကျောင်းကို သွားလာနေကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ထိုသူတို့ အားလုံးက လူကိုသာ မြင်ကြတာဖြစ်သည်။ ဘုရားရှင်က သူတို့စိတ်နှလုံးကို အမြဲမြင်တော်မူသည်ကို ဘယ်တော့မှ မထင်ခဲ့ကြပါ။
ဘုရားရှင်၏ ကြောက်လန့်ဖွယ် အတူပါရှိခြင်းကို ခံစားဖူးပါသလား? ဘုရားရှင်က သင့်အားမြင် တွေ့နေသည်ကို သိရှိပါသလား? တရားစီရင်ခြင်းဆိုင်ရာ ကျမ်းစာ၌ မှတ်တမ်းတင်ထားသကဲ့သို့ ဘုရားရှင်သည် လူတိုင်းကိုသိသည်၊ အပြစ်ဟူသမျှအတွက် တရားစီရင်မည်ဟူသော စိတ်နှလုံးသား ထဲက သိနားလည်သူတို့သည် လူအနည်းငယ်သာ ရှိကြပါသည်။ သင်သည် အပြစ်အခအတွက် ငရဲကို ကျမည်ဖြစ်ပြီး၊ သန့်ရှင်းသောဘုရားရှင်က သင့်၏ အပြစ်များကိုသိနေသည်ဟု သင်ခံစားဖူးပါသလား?
ဤအဆင့်တွင်၊ စိတ်နှလုံးသားထဲက ဘုရားရှင်ရှိကြောင်းကို သိနားလည်နေပေပြီ။ ဘုရားရှင်က မိမိတို့အား မြင့်တွေ့နေသည်ကို သိလာပေပြီ။ သူတို့ပြစ်မှု ကျူးလွန်နေသည်ကိုသိပြီး စိတ်နှသားထဲက အပြစ်အားလုံးကို သိနေသည်။ မှားယွင်းသော အတွေးအခေါ်များ၊ အပြစ်အနာအဆာများ၊ မိမိတို့ လိမ်ညာ ပြောဆိုနေသည်ကို၎င်း၊ ဆန့်ကျင့်ဘက်စိတ်ဓါတ်၊ ဆွေ့မြေ့သော စိတ်နှလုံးလောဘရမက်များ အားလုံးကို ဘုရားရှင် သိနေပါသည်။ အမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦးက”ကျွန်မကိုကျွန်ုမအရမ်းမုန်းမိသည်”ဟူ၍ ပြောခဲ့ဖူး၏ “ကျွန်ုပ်ကို မြင်သောဘုရား” ဖြစ်သည်ကို သင်သိလာသောအခါ သင်လည်းပဲ ထို့ကဲ့သို့ ခံစားပါလိမ့်မည်။ သင်ကျူးလွန်သမျှအပြစ်ကို ဘုရားရှင်အားလုံးသိသည်ကို သိနားလည်သောအခါ သင့် စိတ်ကသိကအောက် ဖြစ်နေပါမည်။ သင့်၏ အပြစ်အားလုံးသန့်ရှင်းသော ဘုရားရှင် ရှေတော်မှောက်၌ ထင်ရှင်းနေသည်ကို သိရသော်လည်း ခရစ်တော်ယေရှုသခင်ထံသို့ တိုးဝင်ဖို့ သင်မခံစားရသေးပေ။ “ကျွန်ုပ်ကို မြင်သောဘုရား” ဖြစ်သည်ကို သင်မသိနားမလည်ပဲ သင့်အပြစ်များအတွက် ခရစ်တော်ဘုရား၏ အသွေးတော်အားဖြင့် ဆေးကြောသန့်စင်ဖို့ လိုအပ်သည်ကို သင်ခံစားမည်မဟုတ်ပေ။
“ သက်တာခရီး၊ ကြောက်ဖွယ်လမ်းမှာ” ဓမ္မသီချင်းဆိုသည်။
၃။ တတိယ၊ ဟာဂရ၏ မျက်စိဖွင့်လင်းပြီးရေတွင်းထဲက ရေကိုသောက်ခဲ့သည်။
ကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး၂၁ကို ဖွင့်ထားကြပါစို့၊ ဖတ်ကြည့်ပါ။ စာရာက ဟာဂရကို ဒုတိယအကြိမ် သဲကန္တာရထဲသို့ မောင်းထုတ်ခဲ့သည်။ အခုဆိုရင်အစာနှင့် ရေပင်ကုန်သွားခဲ့ပါပြီ။ ဟာဂရသည် သူ့သားလေးအား ဘုရားရှင်ကယ်မသနားဖို့ ဆုတောင်းခဲ့သည်။ သူသည် အရမ်းကို စိတ်ပျက် အားငယ်ခဲ့ရသည်။ သို့သော် ခရစ်တော်သည် သူမဆီသို့ နောက်ထပ်တစ်ခါလာရောက်ခဲ့သည်။ (အခန်းငယ် ၁၅-၁၉)အထိ အသံကျယ်ကျယ်ဖတ်ကြစို့!
“ဗူး၌ရေကုန်သော အခါသူငယ်ကို ချုံပုတ်အောက်၌ ထား၍၊ ငါသည် သူငယ်သေသည်ကိုမ မြင်လိုဟုဆိုလျက်၊ ခပ်ဝေးဝေး၊ လေးတစ်ပစ်ခန့်လောက်သွားပြီးလျှင်၊ သူငယ်ရှေ့မှာထိုင်၍ နေ စဉ်၊ သူသည်အသံကို လွင့်၍၊ ငိုကြွေးလေ၏။ ဘုရားသခင်သည် လုလင်၏ အသံကိုကြား တော်မူ၍၊ ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်တမန်က ဟာဂရ၊ သင်၌အဘယ်အမူရှိသနည်း!။မစိုးရိမ် နှင့် လုလင်နေသောအရပ်ထဲက သူ၏ အသံကိုဘုရားသခင်ကြားတော်မူပြီ။ ထလော၊လုလင်ကို ချီကြွ၍ လက်နှင့်မလော့။ ငါသည်သူ့ကို လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်ဟု ကောင်းကင်ထဲက ခေါ်၍ ဟာဂရအား မြွတ်ဆို၏။ ထိုအခါဘုရားသခင်သည် ဟာဂရ၏ မျက်စိကိုဖွင့်တော်မူသဖြင့်၊သူ သည်ရေတွင်းကို မြင်လေသော်၊ သွား၍ရေဗူးကို ရေဖြည့်ပြီးလျှင် လုလင်အားရေတိုက်လေ၏” (ကမ္ဘာ ၂၁း၁၅-၁၉)။
အို!ထိုအရာသည် မည်ကဲ့သို့ပင် အာဗြံနှင့် စာရဲတို့၏ ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ခြင်းကို ခံရပါသော်လည်း ဘုရားရှင်၏ ကျေးဇူးတော်က သူအား အစဉ်အမြဲကယ်မလျှက်ရှိသည်။ “ဘုရားရှင် ကျွန်ုမကို မြင်ပြီ” ဟူသော အသိအာရုံသည် ဘုရားရှင်၏ ကျေးဇူးတော်ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားရှင်၏ ကျေဇူးတော်က ဟာဂရအား သဲကန္တရထဲသို့ ပို့ဆောင်ပေးသည်။ “ရေးဗူး၌ ရေကုန်သောအခါယ….ထိုင်၍ အသံကိုလွင့်၍ ငိုကြွေးလေ၏(ကမ္ဘာဦးကျမ်း၂၁း၁၅-၁၆)။ ထိုအခြေအနေကြုံတွေ့ရသောသူ၊ ကနေ့နံနက်ခင်း ဝတ်ပြုခြင်း အထဲ၌ ရှိပါသလား?သင်၏ရေဗူး၌ ရေကုန်ခန့်နေပါသလား? ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကုန်ခန်းနေပြီဟုထင် ပါသလား? ဤကမ္ဘာလောက သဲကန္တရထဲ အထီးကျန်ဆန်နေပါသလား? သင်၏အသံကို မြှင့်လျှက် ငိုကြွေးပြီးမျှော်လင့်ချက်မဲ့နေပါသလား?မျက်ရည်ခန့်ခြောက်သည့်တိုင် ငိုကြွေးနေပါသလား? ပျေက် ဆုံးဝိညာဉ်များအဖို့ သင့်နှလုံးအိမ်၌ ငိုကြွေးခံစားနေပါသလား? ထိုကဲ့သို့ ထိတွေ့ခံစားမှုတခုခုကို ခံစားနေပါသလး? ထိုကဲ့သို့ တခုခုတွေ့ကြုံရပါက သင့်အဖို့မျှော်လင့်စရာ တခုခုရှိနေပေပြီ။
ခရစ်တော်ဘုရားသည် အသက်စမ်းရေဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ဘုရားမိန့်တော်မူသည်မှာ”ရေငတ်သောသူ ရှိလျှင်၊ ငါ့ထံသို့လာ၍ သောက်လောဟူ၍” (ယောဟန်၇း၃၇)၌ဖေါ်ပြထားပါသည်။”ရေငတ်သောသူလာပါ
စေ၊ အလိုရှိသောသူသည် အဖိုးကိုမပေးပဲ အသက်ရေကို ယူပါစေ”(Jဗျာဒိတ်၂၂း၁၇)၌ မိန့်တော်မူပါသည်။ ဟာဂရ၏ ရေဆာငတ်ခြင်း၊ တရားဒေသနာကို စပါကျန်ဝေငှာရေးသားခဲ့သည်မှာ
“အသက်စမ်းရေသည် မဖြစ်မနေလိုလားသောအရာဖြစ်သည် ခန္တာကိုယ်အတွက်လိုလား ချက်ထပ်ပိုပါသည်။ သင့်ဝိညာဉ်သည် ယေရှုဘုရားနှင့် မတွေ့ဆုံသေးသော အခြေ အနေတွင် သင့်ဝိညဉ်သည် ဆာငတ်သော အနေအထား၌ ရှိသည်၊ ယေရှုမရှိပဲ၊သင့် အသက်တာ ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိမည်မဟုတ်ပါ၊ ခရစ်တော်ဘုရားကို ပေးသနားပါ (သို့မဟုတ်)ပါက ကျွန်ုပ်သေပါလိမ့်ဟူ၍ ငိုကြွေးရပါမည်။ သင်သည်ထိုအရာများကို မသိနားမလည်ပဲကယ်တင်ခြင်းရလုနီးပါး၊ ဖြစ်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည် သင့်အဖို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မူများ၊ အချိန်ကာလ တခုပြီးနောက်မှ ခရစ်တော်သည် သင့်အား ကယ်တင်ပေးပါလိမ်မည်၊၊ထိုအခါတွင် ခရစ်တော်ကိုတွေ့ မည်၊ ထာ၀ရအသက်စမ်းရေကို သင့်ရှေ့၌ ချထားပေးမည်။ ထိုအခါ သင်သောက်ရ လိမ့်မည်၊ ယေရှုသခင်ထံ သင်တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ပါ။ (C. H. Spurgeon, ''Hagar: Eyes Opened,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, March 18, 1866, from Sermons on Women of the Bible, Hendrickson Publishers, n.d.,pp. 32, 37).
အဘယ်ကြေင့်ဟာဂရ ရေတွင်းကိုအစောကတည်းကမမြင်ရသလဲ့?ဒေါက်တာဂျွန်ဂီးလ်(၁၆၉၇-၁၇၇၁) ပြောကြားခဲ့ရာတွင်၊ ဟာဂရသည် ဝမ်းနည်းကြေကွဲလွန်လွန်းသဖြင့် ငိုကြွေး၍ မျက်စိယောင်ကိုင်းနေ၍ ရေတွင်း မတွေ့ရတာဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ဘုရားရှင်က မျက်စိဖွင့်ပေးမှ သူ့ရှေ၌ရှိနေသော ရေတွင်းကို မြင်တွေ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကိစ္စရပ်များ သင့်အတွက်လည်းဖြစ်နိုင်မည်လား?အချိန်အကြာပြီး ငိုကြွေးရလို့ သင့်နှလုံးသားမျက်စိယောင်ကိုင်းမြင်မရတာ ဖြစ်နိုင်ပါမည်လား? မည်သို့ပင်ဆိုပါစေ၊ ၎င်းကျမ်းပိုဒ်က ပြောကြားရာတွင်၊”ထိုအခါဘုရားသခင်သည် ဟာဂရ၏မျက်စိကို ဖွင့်တော်မူသဖြင့်၊ သူသည် ရေတွင်းကို မြင်လေသော်၊ ဟူ၍ (ကမ္ဘာဦးကျမ်း၂၁း၁၉)၌ ဖော်ပြထားပါသည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်က သင့်မျက်စိကို ဖွင့်ပေးပါက သင်သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ယေရှုကို ဒီမနက်တွေ့ဖြစ် ပါမည်။ ခရစ်တော်ဘုရား မိန့်တော်မူရာတွင်၊”ရေငတ်သောသူရှိလျှင်၊ ငါ့ထဲသို့လာ၍ သောက်လော့၊ (ယောဟန်၇း၃၇)။
လူငယ်ဂျော့ခ်ျ ဝိုက်ဖီးလ် (၁၇၁၄-၁၇၇၀)က အရာခပ်သိမ်းကယ်တင်ခြင်းခံရဖို့ ကြိုးစားခဲ့သည်။ ကြာလာသောအခါ သနားစရာကောင်းသော ဝိုက်ဖီးလ်သည် အိပ်ရာကုတင်ပေါ် ပတ်လက်လျှောင်းလျက် “ကိုယ်တော်ဆာငတ်ပါ၏။ ကိုယ်တော်ကို ဆာငတ်ပါ၏” ဟူ၍ ငိုကြွေးလေသော်၊ယေရှုဘုရားသခင်သည် ချက်ချင်းကြွရောက်လာပြီး သူ၏ဆာငတ်မူကို ဖြေသိမ့်ပေးခဲပြီး၊ သူသည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိခဲ့သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သင်တို့၏ သီချင်းစာအုပ်နံပါတ် (၇)ကို သီဆိုကြပါစို့!
ဟိုး၊ စိုးရိမ်ကြောင်ကြ၊ ဝမ်းနည်းသူများ
ယေရှုရှင်သည် အသက်စမ်းရေ၏ အရှင်သခင်
ရေငတ်သော သူအပေါ် အသက်စမ်းရေချပေး
စိတ်နှလုံးကို ဖွင့်လျှက် ဘုရားကျေးဇူးကိုကြည့်မျှော်
ငါ့ကိုရှာသောအခါ၊ ငါသည် သင့်အားအတွေ့ခဲ့မည်
ဂတိတော်အောက်မေ့၊ သင်အဖို့ သတင်းကောင်းရှိ
စိတ်နှလုံးကို ဖွင့်လျှက်ဘုရားကျေးဇူးကို မျှော်ကြည့်
(၁၈၄၉-၁၉၂၂၊ လူစီ၊ ဂျေ၊ ရိုက်တာရေးသားသီကုံးသောဟိုး! “ရေငတ်သောသူများလာနိုင်ကျူး”ကိုသင်းအုပ်ဆရာမှပြင်ဆင်သီဆိုသည်။)
ယေရှုဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား “ရေငတ်သောသူရှိလျှင်၊ ငါ့ထံသို့လာ၍သောက်လော့” (ယော၇း၃၇)။ သင့်အသက်တာ ရိုးရှင်းစွာဖြင့် ယေရှုသခင်ထံလှမ်းလာ၍ “အလိုရှိသောသူသည် အဖိုးကို မပေးပဲ အသက်ရေကိုယူပါစေ” (ဗျာဒိတ် ၂၂း၁၇)၌ မိန့်တော်မူပါသည်။ သင့်အပြစ်အဖိုးအခအတွက် လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ် ယေရှုဘုရားအသေခံပေးဆပ်ပြီးဖြစ်သည်။ သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီး အထက်ကောင်းကင်ဘုံသို့ တက်ကြွတော်မူပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထိုအရပ်၌ သင့်ထာ၀ရအသက်အဖို့ငှါ မားမားမတ်မတ်ရှိနေလျှက်ပါ။ သခင်မိန့်တော်မူပါသည်ကား “ရေငတ်သောသူရှိလျှင် ငါ့ထံသို့လာ၍ သောက်လော့”ဟူ၍ မိန့်တော်မူပါသည်။ မိတ်ဆွေ သင်သည် ယေရှုထံတိုးဝင်ချဉ်းကပ်ပါမည်လား? သင်ထိုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါမည့် အကြောင်းဒီနေ့မနက် ကျွန်ုပ်ဆုတောင်းပေးနေပါသည်။ “လောကီလူသား” ဟူသောဓမ္မသီချင်းကို ပြန်လည်သီဆိုပါသည်။
-သင်သည်မောပန်းလျှက် ချဉ်းနောင်ခြင်းခံရပါသလား လောကပျော်ပါးမူနှင့် စိုးရိမ်းကြောင်ကြမူကြံရသူ ခရစ်တော်သခင်ကို တွေ့ဆုံဖို့ ဆာငတ်နေပါသလား ဂတိတော်အောက်မေ့၊ သင့်အဖို့သတင်းကောင်းရှိ ဆာငတ်သူတို့အပါ် အသက်စမ်းရေးပေးသနား သွေ့ခြောက်သော ကိုယ်ခန္တာအပေါ် အသက်စပ်နေပေး စိတ်နှလုံးကို ဖွင့်လျှက် ဘုရားကျေးဇူးကို မျှော်ကြည့် ငါ့ကိုရှာသောအခါ၊ ငါသည်သင့်အားအတွေ့ခံမည်။
-ဒေသနာတော် မတိုင်ခင်းဒေါက်တာ ခရိတ်တန်အာယ်၊ ချန်မှ (ကမ္ဘာဦးကျမ်း၂၁း၁၅-၁၉) အထိကို ဖတ်ကြားပေးသည်
-ဒေသနာတော် မတိုင်ခင်၊ မစ္စတာဘင်ဂျမင် ခင်ကိတ်ဂရိဖက်စ်မှ (၁၈၄၉-၁၉၂၂) လူစီ၊ ဂျေ၊ရိုက်တာ သီကုံးရေးထားသော “ရေငတ်သူများလာနိုင်ကျူး”ကို သီဆိုပေးသည်
“ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ရ၏။ ကိုယ်အလိုအလျှောက် ရောက်သည်မဟုတ်။ ဘုရားသခင်သနားတော်မူရာဖြစ်သတည်း။” (ဧဖက် ၂း၈)
(ရောမဩဝါဒစာ ၅း၁၂၊ ဧဖက်ဩဝါဒစာ ၂း၅)
၁။ ပထမ၊ အာဗြံနှင့် စာရဲတို့၏ ဆိုးသွမ်းမိုက်မဲသော ညှင်းဆဲနှိပ်စပ်ခြင်းခံရသော်လည်း ဟာဂရသည် ကယ်တင်ခြင်းကို ခံခဲ့ရ၏ (ဧဖက် ၂း၈)။
၂။ ဒုတိယ၊ ဟာဂရ၏ ပထမအကြီမ် ဘုရားရှင်နှင့် ဆုံတွေ့သောအတွေ့အကြုံများ (ကမ္ဘာ၁၆း၆ယ၉ယ၁၃-၁၄)
၃။ တတိယ၊ ဟာဂရ၏ မျက်စိပွင့်လင်းပြီး၊ ရေတွင်းထဲက ရေကိုသောက်ခဲ့သည်။ (ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂၁း၁၅-၁၉)၊ (ယောဟန် ၇း၃၇)၊ (ဗျာဒိတ် ၂၂း၁၇)။